4: Acer Aspire One, ha u dirin Datashow - Geofumadas
Abriil, 2010 egeomates My, dhowr
Kombuyuutarka Acer Aspire, isku dar ah si ay u soo diraan muuqaalka shaashadda si ay ufilan u noqoto kormeeraha dibadda waxay ku jirtaa Fn + F5. Waxay dhici kartaa in aysan ka jawaabin, iyo markaad haysato dadka 200 horta, waa dhibaato weyn.
Aynu aragno sida loo xaliyo.
Haddii ay wax walba si fiican u socdaan
Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan, waa furaha kaliya ee la riixo, qaabka la samayn doono laptop kasta oo kale iyo waxaan leenahay aragti ah in wax aan dhicin. Furaha kale ayaa loo isticmaalaa, mararka qaarkood F5. Riix furaha warqadaha buluuga ah Fnka dibna F5, laakiin ha furin furaha faaruqinta illaa iyo inta uu maqaalku ku soo baxayo taas oo kuu ogolaanaysa inaad dooratid midkii aad rabto inaad dirto:
Astaanta ugu horeysa waxay ka dhigan tahay in aysan waxba soo dirin, sidaas darteed sameeya adigoo sii deynaya furaha Fn waxba ma samaynayo.
Midka labaad, wuxuu soo diraa kormeer labaad, isaga oo eegaya aragti ahaan laptop-ka. Faa'iido la'aanta fursadani waa inaadan xalin karin qadar badan marka loo eego taageerada laptop-ka.
Qaybta saddexaad waxay u dirtaa kaliya kormeeraha dibadda. Tani waa mid ku fiican, haddii aad leedahay kormeere dibedda ah oo aad rabto in aad hayso tallaabooyin sare oo aan taageersan laptop.
Qolka wuxuu u diraa hal mashruuc oo kaliya, xalka 800 600
Haddii wax aan la xakamayn.
Caadi ahaan waxay dhacdaa in nasiib daro uu wax gooyo, guud ahaan inuu taabto msconfig si loo raadiyo hagaajinta xawaaraha bilowga.
Taas awgeed, waxaan sameynaa:
Ku bilow "run> msconfig> aqbalo
Halkan waxaan ku aadaynaa tabka 'Home', waxaanan hubinnaa doorashada QtZgAcer. Ku fur, kadibna dooro aqbalaan, nidaamka wuxuu u baahan doonaa reboot.
Marka mashiinka dib loo furo markaa dhibaatadu mar kale ma jiri doonto.
Markaan wax ka bedelno, farriin ayaa u muuqata in ay na xasuusiso inaanu taabannay qaabka bootka. Waa in aan u hawlgalnaa ikhtiyaarka aanad marnaba xasuusan.
Sababaha kale ee cajiibka ah waa in ay arkaan haddii mashruucu uusan ku xirnayn dekedda ku habboon (qaar baa la keenaa) ama in ay tahay kala badh oo aan la daboolin oo u baahan in dib loo bilaabo si loo aqoonsado mashiinka.
Waxay sidoo kale dhacdaa in isku-darka furayaasha FN + F5 uusan kor u qaadin tabka si ay u doortaan shixnadaha; Waxay badanaa dhacdaa sababtoo ah mashiinka ayaa la damiyey oo la isticmaalay ka dib markii la isticmaalayo kormeeraha sare ama marka kormeeraha saddexaad sida "ipad-ka" lagu dhex daray barnaamijka 'Idisplay'. Wax soo saarku waa inuu midig-guji desktop-ka oo uu doorto guryaha, ka dibna qeybta "qaabeynta" tabeelle kastaa waa la doortaa oo xulashada "wadaagida desktop" ayaa la gooyaa, ka dibna aqbal.
Post Previous«Previous Contours ka polylines (Step 2)
Post Next Qiyaasaha Koobka Adduunka ee Koonfur AfrikaNext »
2 Jawaab "4: Acer Aspire One, ha u dirin Datashow"
JLu isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin wax badan !!!! xalka ... taas oo ahayd !! Khasaaraha ah ee helitaanka xawaaraha sare ee xiritaanka kulanka ayaa saameeyey habka saadaasha ee muujinta xogta
HIMILADA isagu wuxuu leeyahay: